लक्जरी टूर भारत- टूर परिचालक भुबनेश्वर - एक्सएनएक्सएक्स- 91
ओडिशा शीतकालीन टूर पत्ता लगाउनुहोस्
यो जाडो यात्रा गर्ने विचारहरू खोज्दै, तर कहीं रोचक भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ? रेत पिब्बल्स 'शीतकालीन टूर ओडिशा प्याकेज तपाईंले सबै चाहनुभएको छ। ओडिशा, दरिंगबाडी मोटी जंगलको कश्मीर र थुप्रै जलविद्युतको रूपमा प्रकृति प्रेमीहरूलाई प्रेरित गर्नेछ। गुफाहरु, creeks र पहाडहरु को पूर्ण Satkosia बाघ आरक्षित छ को लागि सबै भन्दा राम्रो स्थान [...]
मा पोस्ट गरियो: यात्रा
यात्रा गर्ने हैदराबाद? यी स्थानहरू मिस नगर्नुहोस्
इतिहास र आधुनिकताको यसको बेजोड मिश्रणको साथ, हैदराबादले कहिल्यै प्रभाव पारेको छैन। शहर यसको अनूठा संस्कृति, समकालीन सेटिङ र मुखवार्डिंग व्यञ्जन को लागि नोट गरिएको छ। पर्यटकहरू दिन र रात्री मनोरञ्जन राख्ने स्थानमा रहेको ठाउँ हो। यो हैदराबाद को यिनी आश्चर्यजनक विशेषताहरु र मान्छे को अप्रत्याशित नम्रताको कारण [...]
भारतमा ब्रेकटेकिङ गन्तव्य वेनिस ठाउँ
गन्तव्य विवाहको लागी अप्ठेरो एउटा नयाँ प्रवृति भएको छ र सबै सही कारणहरूका लागि! तर यो तपाईंको विशेष दिनको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्ने गन्तव्य छनौट गर्न साँच्चिकै हेक्टिस्टिक हुन्छ। भारतमा जोडेहरू उनीहरूको गन्तव्य विवाहको लागि ताजा अफबिट स्थानहरू खोज्दै छन्। यदि तपाईं यो तरिका देख्नुहुन्छ भने, हरेक [...]
भारतमा सर्वश्रेष्ठ लक्जरी स्थलहरू 2019
भारत एक देश हो, जहाँ तपाईं धेरै ठाउँहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ जुन तपाईंको सास दूर हुनेछ। यस्तो सुन्दरता र भव्यता। यद्यपि मार्च भारतमा पर्यटनको मौसमको अन्त्य मानिन्छ, यस समयको समयमा केही स्थानहरू सर्वोत्तम भ्रमण गरिएका छन्। सर्दियों संग बस देखि नजर राख्छ र महसूस गर्छन, भारत रंगीन रंग संग खिल रहेको छ [...]
2019 को लागि थाईल्याण्ड ट्रेवल गाइड ब्याकिंग गर्दै
थाईल्याण्ड दक्षिणपश्चिम एशिया को एक किस्सा, एक दहन सांस्कृतिक कलम, यसको मित्रता, फ्लोबओरेन्स र खाना को लागि प्रसिद्ध छ। थाईल्याण्ड आफैले बोल्छन्। जब तपाईं यसको नाम सुन्नुहुन्छ, तपाईंले पहिल्यै समुद्र तट, सुन्दरता, जंग, र खानाबारे सोच्नुहुन्छ। र तपाईंको विचारहरू स्थानमा छन्। थाइल्याण्डले धेरै प्रस्ताव गरेका यात्रीहरूलाई - कुनै पनि कुरा होइन [...]
11 कारण तपाईं किन माया गर्नुहुन्छ भारत
श्रीलंका: ए यात्राको एशियाको नयाँ हॉटेस्ट गन्तव्य
यदि तपाईं श्रीलंका पुग्नु भएन भने तपाईले गर्नु पर्छ। तपाई निश्चित रूपमा एक खुल्ला हृदयको साथ गर्नुपर्छ। र, किस प्रकार को यात्री श्रीलंका को लागि उपयुक्त छ? सबैजना! परिवारबाट जुत्ताहरू वा एकल यात्रीहरू र सबैको बीचमा, श्रीलंकाको एक अप्रत्याशित आश्चर्य हो जुन निराश हुनेछैन। मित्रवत अनुहारहरूसँग भरिएको, आकर्षक [...]
तपाईंको भेटघाट कसरी तपाईंको महत्त्वेपूर्ण सम्झनायोग्य बनाउन सक्नुहुन्छ
त्यसोभए, तपाइँ अन्ततः तपाईंको महत्वपूर्ण अन्यसँग लामो समयदेखि अवकाश अवकाश लिन जाँदै हुनुहुन्छ। तर जब एक जोडीले सँगसँगै हिट गर्ने निर्णय गर्ने बेलामा शराब र गुलाब सधैं यो छैन। तपाईंको जोडीको अनुभव र तपाईंको सम्बन्धको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा एक जोडे छुट्टी एक उत्तम अनुभव हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, अवकाश [...]
भारतमा स्थानहरू सिंहासनमा फ्यानको हरेक खेलको भ्रमण गर्नु पर्छ
के तपाईं सिंहासनको गेम हेर्न पछि गलत पीढीमा जन्मे जस्तो लाग्छ? म तिमीलाई बुझ्छु! अन्तिम सीजन लगभग यहाँ छ र म शान्त रहन सक्दैन!2वर्षको प्रतीक्षामा कुनै पनि गोटी फ्यानको लागि आक्रोश हो। तर, पहिलो एपिसोड हेर्न पछि, मलाई थाहा छ यो प्रतीक्षाको लागी केहि हुनेछ। [...]
कुआलालम्पुरलाई यात्रा गर्दै? तपाईलाई थाहा छ सबै कुरा
एक शहरको विरोध। एक शहर यति गतिशील र पूर्ण जीवन हो जुन तपाईं नयाँ चीजहरू हेर्न सक्नुहुन्न र के गर्न सक्नुहुन्न। कुआलालम्पुर एक ठाउँ हो जहाँ आधुनिकता परम्परा मिलाउँछ। 19 शताब्दीको मध्य सम्म पुग्ने क्षेत्र, कुआलालम्पुर हालको क्षेत्रमा वर्षावनको साथ राखिएको थियो। यो मात्र थियो [...]